Iyo Nyaya yeiyo BackPack mwana: Kupfura mbudzi uye kuyedza zvakanyanya - Aripi iye zvino? - Pop-Tsika
Iyo Nyaya yeiyo BackPack mwana: Kupfura mbudzi uye kuyedza zvakanyanya - Aripi iye zvino?
Russel Horning, aka the BackPack mwana, ndiye munhu akapfura mukurumbira nekuda kwekutamba kwake floss. Kunyangwe paine mukurumbira wakakura mumazuva ake ekutanga, vanhu vazhinji ikozvino havazive nezvemunhu uyu.
Akazvarwa muna 2001, Russel akasimuka kuita mukurumbira nekuda kwemavhidhiyo ake emadhirama e Instagram. Akanamatira mwana weBackPack, nekuti akatakura chikwama chake chekuisaina, aive nechinhu chekuita zviito zvinosetsa achichengetedza kumeso kwakatwasuka.
Aripiko mwana weBackPack izvozvi?
Chikonzero chaicho chekuti mwana weBackPack akasimuka kuita mukurumbira ndechekuti Rihanna akaona account yake pa Instagram ndokumupa mhere. Mushure meizvozvo, aive vateveri makumi mashanu vakapfuma papuratifomu. Nguva pfupi yapfuura, Katy Perry akacherekedza account yake, uye akazopedzisira ave mune imwe yemitambo yake Mugovera Night Live kwaakaonekwa achiita floss.
Mushure mekuita uku, mwana weRedPack akaonekwa murwiyo rwaKaty Perry 'Swish Swish'. Akaenderera mberi nekuisa zvemukati paprofile yake ye Instagram, achimaka Rihanna na Katy Perry, chiito icho internet chinoita seku 'kuyedza kuomarara kuti zvirambe zviripo.'
Pakarepo mushure meizvi, akaita chimwe chinhu chakakonzera kuti internet itungamidze kupisa kwakawanda kwaari. Muna 2017, akashandisa pfuti yeBB kupfura mbudzi muziso uye akaisa vhidhiyo kune yake Instagram profile. Kunyangwe akaiburutsa pasi nekukasira, chiitiko ichi chakamutsa kutsamwa pakati pechaunga. Gare gare, akaenderera mberi ndokugadzira imwe vhidhiyo kutsanangura kuti mbudzi yaive yakanaka.
Indaneti yakamutsamwira zvakare, nekuti mu2018, amai vake vakamhan'ara kumatare eFortnite yekubatanidza kutamba kwemutambo mumutambo. Nekudaro, iyo mhosva yakadzingwa nekuti kutamba hakuna kunyoreswa kumwana weRedPack zvakadaro.
Gore chairo akaburitsa rwiyo rwake rwechipiri 'Flossin' naDJ Suede. Rwiyo rwake urwu haruna kugara zvakanaka neboka revanhu kusiyana nerwiyo rwake rwekutanga '2 Litt'. Kuzivikanwa kwake kwave kuri pakadzika pasi kubva ipapo pachayo.
Parizvino, mwana weRedPack ane huwandu hwakanaka hwekutevera pa Instagram, YouTube uye TikTok. Uye mhando yezvinyorwa zvaanogadzira zvichiri zvakafanana. Iye anoramba achigadzira mavhidhiyo ake ega achisekesa, uku achichengeta yakatwasuka kumeso. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti akaremara makomendi pane ake mavhidhiyo paYouTube, izvo zvinoratidza kuti haadi kuziva izvo vateveri vake vanofunga nezve ake zvemukati. Kunyangwe, sezvo ari mukuru, pane mukana uye tariro yekuti hunhu hwezviri mukati zvichachinja mumwedzi mishoma iri kuuya.
zvaunofanira kuita kana iwe uchinetseka
misoro inosetsa yekutaura nezvayo neshamwari
mwaka unotevera wema american ese wabuda riini
kutamba kworudo here kana kuti kushamwaridzana
sei kusarudza mukomana chaiye pakati pevaviri